यस्तो छ राहुल गान्धीको संजीवनी बुटी, अब के गर्छन् मोदी ?
२६ मंसिर २०७५, बुधबार १२:४४
काठमाडौं, २६ मंसिर । संयोग नै भन्नुपर्छ राहुल गान्धीले जुन दिन भारतीय काँग्रेस पार्टीको अध्यक्ष पद सम्हाले, त्यसको ठीक एक वर्षमा उनको नेतृत्वमा पार्टीले पाँच राज्यको विधानसभा चुनावमा अभूतपूर्व प्रदर्शन गर्‍यो । यस्तोमा चुनावको परिणाम काँग्रेसको पक्षमा आउनु नै राहुल गान्धीका लागि संजीवनी सरह भएको छ ।
भारतमा राहुल गान्धीको नेतृत्व क्षमतालाई लिएर प्राय: बहस भइरहने गर्छ । भाजपासमेत अन्य पार्टीहरुले समेत उनको नेतृत्व क्षमतालाई लिएर बेलाबेलामा प्रश्न उठाउने गर्छन् । काँग्रेसका केही पुराना तथा वरिष्ठ नेताले समेत राहुल गान्धीलाई अध्यक्ष बनाएकोप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै आएका छन् । राजनीतिमा राहुलको हर कदम फ्लप या जोक सावित भएको बताइन्छ ।
राहुल गान्धी आधिकारिक रुपमा ११ डिसेम्बर २०१७ मा पार्टी अध्यक्ष बनेका थिए । यस पदमा उनी निर्विरोध चयन भएका थिए । यद्यपी राहुल गान्धी आधिकारिक घोषणाभन्दा निकै पहिलेदेखि नै अघोषित रुपमा पार्टी अध्यक्षको रुपमा काम गर्दै आएका थिए । अध्यक्ष हुनुभन्दा ठीक अगाडि नोभेम्बर २०१७ मा भएको निर्वाचनमा काँग्रेसले गुजरात र हिमाचलमा हार बेहोर्नुपर्‍यो । भाजपाले आफ्नो गढ गुजरातमा सत्ता कायम राख्यो भने हिमाचलमा पनि भाजपाले कब्जा जमायो । यसलाई राहुल गान्धीको व्यक्तिगत दोषको रुपमा समेत लिएका थिए केही नेताहरुले ।
यसअघि मार्च २०१७ मा यूपी, गोवा, उत्तराखंड, मणिपुर र पंजाबमा भएको विधानसभाको निर्वाचनमा काँग्रेसले चार राज्यमा पराजय भोगेपछि राहुल गान्धीको नमिठो आलोचना भएको थियो । पञ्जाबमा भने काँग्रेसले जितेको थियो ।
राहुलको पक्षमा यसरी बनिरहेको छ समीकरण
पाँच राज्यको विधानसभाको निर्वाचनमा मिजोरम तथा तेलंगानामा स्थानीय दलहरुको समीकरणमा सरकार बन्ने देखिएको छ । मिल्ती देखियो । यसबााहेक मध्य प्रदेशमा भाजपा र काँग्रेसको कडा प्रतिस्पर्धा भएको थियो । जसमा काँग्रेसले सबैभन्दा बढी सिट जितेर पहिलो पार्टी बन्यो । राजस्थान र छत्तीसगढमा काँग्रेसले सत्ता फिर्ता लिने संकेत देखिएको छ । यी दुवै राज्यमा अहिलेसम्म भाजपाको सरकार थियो । यस्तोमा पार्टी अध्यक्ष बनेको एक वर्षमा पाँच राज्यमा भएको विधानसभाको निर्वाचनमा काँग्रेस शक्तिशाली देखिएको थियो । लगातार जनमत गुमाइरहेको काँग्रेसले यसपटक गान्धी अध्यक्ष भएपछि जीत हासिल गर्नुलाई एकाथरीले संजीवनी बुटीको रुपमा लिएका छन् । यो काँग्रेसका लागि उपहार सावित भएको छ ।
यसकारण महत्वपूर्ण यो नतिजा
पाँच राज्यमा भएको यो विधानसभाको निर्वाचनलाई लोकसभा चुनाव २०१९ को सेमिफाइनल मानिएको छ । तर, आगामी लोकसभा चुनावभन्दा ठीकअघि यो अन्तिम चुनाव हो । यसकारण पनि यसलाई जनमतसँग विशेष जोडिएको छ । विपक्षी पार्टीले यसलाई प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको लहर सकिएको भन्दै आएका छन् ।
बढारिएलान् मोदी ?
यी पाँच राज्यमध्ये तीन राज्यमा मोदीको पार्टी भाजपाको सरकार थियो । तर, काँग्रेस ठूलो पार्टी बनेपछि बीजेपी सरकारका तीनै मुख्यमन्त्रीले राजीनामा दिइसकेका छन् । आगामी वर्ष हुने निर्वाचनमा काँग्रेसलाई यो जनलहरले केही हदसम्म फाइदा पुर्‍याउने देखिन्छ । अन्य राज्यमा पनि काँग्रेसको बलियो उपस्थिति हुने देखिएको छ । भारतीय राजनीतिक विश्लेषकहरुलाई आधार मान्ने हो भने अब मोदीको पार्टी बीजेपी पहिला जस्तो बलियो भने हुँदैन । उसले बहुमत ल्याउँदैन । यसर्थ उसको एकलौटी सरकार रहँदैन । काँग्रेसको सरकार बन्न सक्ने पनि सम्भावना देखिन्छ ।
Tagsनरेन्द्र मोदी राहुल गान्धी विधान सभा